a380 Best on rikooo?
umbuzo a380 Best on rikooo?
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #522 by ItzDan
Ngaba ukho wazi a380 ndibone ukuba kufanele ukuba
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #525 by Dariussssss
Nor Qinisekisa Ndifumana kuyo ... Ngaba you mean payware freeware okanye, apho mshini?
Freeware, kukho kuphela mnye-Project Airbus A380. Payware, a lot of kubo ... Wilco, AFS ... akakwazi ukukhumbula bonke.
Ulwazi iyakuba mnandi.
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-2 inyanga edlulileyo Dariussssss.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #535 by Gh0stRider203
namnye. nto Airbus ....... ukuhamba kwendiza lol
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #536 by Dariussssss
Okanye, ezifana Gh0st wathi, nihambe iBoeing 747 ukuba ufuna into enkulu.
Phantse zonke sims endiyaziyo off, Airbus moya zizinto nje ezingenamsebenzi. Ndaba a die hard Airbus fan iminyaka, kwaye kwafuneka ukuba babuye umva wam phezu kwalo, nje ngenxa yokuba loo.
Bendiya kuba ubomi ukubona ezo iinqwelomoya yaqulunqa indlela efanayo ezifana iBoeing indoda yonwabileyo, kodwa ... oko edubuleyo elide.
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #537 by Gh0stRider203
awukwazi ukuya engalunganga ukumkanikazi Skies
Yena Sekudlule kwimveliso ukususela 1970; Yena waba zothutho ephambili uMongameli waseUnited States ukususela 1986; Yena kulula REAL phezu kwamehlo; ukuba ufumana imodeli ekunene (abo apha kwi Rikoooo, NDINGAKWAZI ndithi igama embi, yaye loo nto ivela kum njengelinge, HAYI kube yimodareyitha), yena ujongana njenge iphupha;
Okudingayo Ndithi ngakumbi?
Long Live The Queen! (I 747 leyo Heh)
Ixesha ukwenza page: 0.246 imizuzwana